Ukubuyela umva yindlela efunekayo yokuThengisa | Martech Zone
Ndingumlandeli omkhulu webhlog kaAndy Sernovitz, Demethi! Ndinqwenela ukuba bendiya kuyicinga loo nto! Namhlanje, nangona kunjalo, andiqinisekanga ukuba ndiyavumelana noAndy.
Abathengisi: Yeka ukuthumela ukunyusa okuqala ngala maxesha anzima, indlela yokuthengisa kwintengiso, okanye nakuphi na ukunyusa okungalunganga koqoqosho.
Ndinqwenela uAndy ukuba ebecinga ngale nto:
Yenza uphando kwi Ukubuyela umva kuGoogle kwaye uya kufumana amanani ayothusa. Sikwimeko yokudodobala kwezoqoqosho. Singene nzulu kuqoqosho. Abantu abaninzi baphulukana nemisebenzi yabo. Ukoyika abanye ukuphulukana nemisebenzi kubangela ukuba abathengi banciphise iindleko. Ayisiyonto imbi leyo, yinto enengqiqo.
Ukuthetha malunga nendlela yokonga kuqoqosho kungangandi ezintle - kodwa ayisiyonto imbi, nokuba. Inkqubo ye- Ukudodobala kuyinto embi, iimveliso zakho okanye iinkonzo ozibonelelayo zisenokuba njalo ezintle.
Le ayisiyenkukhu okanye iqanda… khange singene kobu bumdaka kuba abantu baqala ukuthetha malunga nokudodobala koqoqosho okanye bathetha ngako. Ngapha koko, ukudodobala koqoqosho kusenokwenzeka ukuba kwaqala kunyaka ophelileyo ngaphambi kokuba umntu athethe ngawo. Ngoku sikuloo nto, kufuneka sithathe amanyathelo ukuyenza iphile.
Yonke inkampani kufuneka icinge ngendlela yokwenza ngcono imali kuqoqosho nakumyalezo ngokufanelekileyo. Ngaba inkampani yakho ibonelela ngamashishini okanye abathengi abafuna iindlela zokunciphisa? Kungcono uqale uthethe ngayo!
Ukuhlanganiswa kweBlogware nguMzekelo oMkhulu:
Inkampani yam ibonelela enye indlela engabizi kakhulu kubathengisi ukuze bavelise izikhokelo ezingenayo kwiinkampani zabo. Ngokuka-eMarketer, ukuthengisa kukwindawo yokuqhawula kwiinkampani ezininzi:
Ukuba ndingumthengisi kwinkampani enokuthi ivumele abanye abasebenzi ukuba bahambe okanye bafuna ezinye iindawo zokusika, qagela ukuba ndifunani kuGoogle? Ndikhangela iindlela zokusika uhlahlo-lwabiwo mali, jonga njengentshatsheli, kwaye ugcine umsebenzi wam de le nto igqithe!
Ezinye iinkcukacha ezothusayo zokuThengisa kuqoqosho:
I-48% yeenkampani ezinkulu zase-US ezivotelwe UkuthengisaSherpa ngoSeptemba bathi uhlahlo-lwabiwo mali lwabo lwemveli luya kuncitshiswa; I-21% ithe ukusikwa kuya kuba "kubalulekile".
I-59% yabaphathi abaphezulu bezentengiso abachongwe yinkampani yeenkonzo zentengiso Epsilon kulindeleke ukuba kuncitshiswe uhlahlo-lwabiwo mali lwabo lwentengiso; yi-13% kuphela eyayilindele ukwanda.
I-85% yabathengisi abangama-600 ekwenziwe uphando ngabo IiNtengiso zeNtengiso babanga ukuba bazakunciphisa ukuthengisa kwabo ngokwesiko.
53% Umbutho wabathengisi bakaZwelonke (ANA) amalungu athi asika uhlahlo-lwabiwo mali ukuphendula ukudodobala; I-40% ithe batshintsha ingxubevange yeendlela zentengiso kwiindlela eziphantsi zeendleko.
Kuya kuba kukungakhathali kum, njengoMarketer, ukuba ndingathethi malunga nokudodobala koqoqosho nokuba kutheni siziindleko eziphantsi kwezinye iinkampani ezizama ukuqhuba ishishini ngaphandle kwezixhobo ezazifudula zinazo. Le yeyona mozulu imele ukuba siyenze nzulu kwaye sikhule kuyo.
Kuya kufuneka uthengise malunga nayo.
Ingcebiso yomnqwazi kuJeff ku uyilo langaphantsi + intshukumo yekhonkco kwiphepha leMarketer!
tags: dibanisa enyeWordPress
Interspire yokuThuthukisa ubuNgcono bokuThengisa nge-imeyile
Ngomhla wama-24 ku-Disemba 2008 ngo-4: 44 AM
Ndivumelana nawe ngokupheleleyo Doug. Ndingaya inyathelo eliya phambili kwaye nditsho ukuba ngenene sifuna ukunceda siza kubaxelela ngendlela yokuphepha ukwenza iimpazamo kuqoqosho oluphantsi okanye ukudodobala koqoqosho okanye nantoni na ofuna ukuyibiza ngala maxesha.
Ukuyiqhubela phambili, ndingathi njengoko ukuthengisa kuyinxalenye yesicwangciso soshishino sisonke, kufuneka sijolise usomashishini okanye umnini weshishini ingakumbi umnini wamashishini amancinci oqhele ukwenza eyedwa. Uninzi lwaba banini bamashishini bahlanjululwe, balinde isicathulo esilandelayo kwaye banethemba lokuba umntu uya kubanika iingcebiso, naziphi na iingcebiso ezilungileyo.
Ndiyavuma ukuba kufuneka sibaxelele inyani: "Iindlela ezilishumi zokugcina ishishini lakho elincinci lingangeni phantsi kolu qoqosho lusezantsi" okanye into esecaleni kwalo mgca. Kufuneka sibaxelele ukuba kufuneka bachithe ekuthengiseni kolu hlobo loqoqosho kwaye kutheni.
Dec 24, 2008 ngo-5:02 PM
Isithuba esihle, Doug, ngokuthe ngqo kwaye ishishini-y. Ndikumanye ku-Friend Connect.
Imibuzo: Kutheni abantu abaninzi-kutheni NAMNTU-ekholelwa ukuba ukuthengisa yeyona nto ilumkileyo yokuqala? Ngaba akufanelanga kube yinto eyahlukileyo? Kutheni le nto sonke singavele sizisonge ngesambatho esingabonakaliyo? Yinto enye. Ngaba nayiphi na inkampani kufuneka yenze imali ukuba akukho mntu unokuyibona?
Kwicala elingasemva lengqekembe, ukuthengisa akuthethi nje kuphela, kodwa kule minyaka yokuthengisa intlalontle, IYAMAMELA kwaye iphendule ngokufanelekileyo. Iyabona, iyahamba. Ukusika ukuthengisa kule meko kufana nenciniba egquma intloko entlabathi, okanye umntwana ovala amehlo akhe aze avale iindlebe zakhe.
Bonke abenzi bomsebenzi kufuneka babambe uloliwe umkhondo: ukuthengisa YINTO YOKUGQIBELA ekufuneka uyinqumle. Oko kum yinto yokwenyani, epheleleyo kunye neyonke engenangqondo. Umntu ongenangqondo! Sika ukuthengisa?! Intoni?! Andivanga?!
…kwaye, bahlobo, sisimo sengqondo thina abathengisi ekufuneka sisibonise ukuba siza kusinda.
Dec 24, 2008 ngo-6:19 PM
Umbuzo omkhulu, Ngaba! Iisenti zam ezimbini kukuba uninzi lwabathengisi babhekiswa ukuba basabele kunokuba bacwangcise. Isebe lezentengiso alinabo abasebenzi abazakuqala ngabo ukuvelisa ukukhula kunye NOMLINGANISO wokukhula kwenkampani. Ngenxa yokuba bengenako ukubonisa ixabiso labo kwintlangano, badla ngokuba ngabokuqala kwibhloko yokunqunqa.